Argentina Oo Go’aan Qariib Ah Ka Gaartay Maaliyada No.10 Ee Lionel Messi Inkastoo Xiddiga Barcelona Uu Ka Maqan Yahay Xulka
Argentina waxa ay heystaan qaar ka mid ah weeraryahanada ugu fiican caalamka sida Paulo Dybala, Angel di Maria, Sergio Aguero, Mauro Icardi iyo Gonzalo Higuain. Laakiin sidaasi oo ay tahay waxa ay ku tiirsan yihiin Lionel Messi oo fasax ka qaatay xulka lana ogeyn xilliga uu ku soo laabanayo tan uyo markii uu ku soo niyadjabay Koobkii Adduunka ee sannadkan lagu qabtay Russia. Argentina...
2018 (HOL) – Waxaa laga yabaa in aad markiiba ku jah-wareerto ciwanka maqaalkan, laakiin waxa aan ka hadley-no ma’aha wadankii Soomaaliya iyo Ururka hubeysan Al-shabaab, balse waa caaryahan lagu naaneyso Somalia oo ku biiray kooxda Kubadda Cagta Al-shabaab ee ka dhisan dalka Saudi Arabia. 29 jirkan magaciisa rasmiga ah uu yahay Wergiton do Rosario Calmon una dhashay...
Qaabkii Ay Dortmund U Garaacday Kooxda Man City Xilli Riyad Mahrez Kulankiisii Ugu Horeeyay U Saftay Citzen
Kooxda Man City ayaa dusha loo saaray kulankii ugu horeeyay ee tartanka International Champions Cup iyaga oo guuldaro kala kulmay kooxda Borussia Dortmund kulan uu Riyad Mahrez ciyaaray kulankii ugu horeeyay ee kooxda Man city. Xiddiga garabka uga ciyaara Dortmund ee Mario Gotze ayaa goolk guusha u dhaliyay kooxdiisa isaga oo dhaqiiqadii 28-aad gool u badalay rikoodhe...
Warbixin: Maxaa Ka Jira In Ay Real Madrid Iyo Chelsea Heshiis Ka Gaareen Edin Hazard?
Chelsea waxa ay heshiis Real Madrid kala gaadhay iibinta Edin Hazard oo ay isku afgarteen aduun dhan 190 million (£170m), sidaas waxaa laga soo xiganayaa warar ka soo baxaya France. Mar uu hadlay koobkii aduunka kaddib waxa uu sheegay in uu doorbidayo ka tegidda Stamford Bridge halka Real Madrid ay tahay jihadiisa macquulka ah. Hazrad qandaraaska uu kula jiro Chelsea...
Falanqeynta:- Maxaa keenay Fashilkii Messi ka qabsaday Koobka aduunka & Hal arin oo reer Arjentiin ku Cafin karaan !
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada Xubintan kamid ah Xubnaha falanqeynta maalin laha ee aad Boggeena uga barateen. Xubintan waxaan kusoo qaadan doona Qaabkii uu uciyaarayey Lionel Messi Mucjisada Kubadda Cagta dunida & Kooda Barcelona oo dood badan ka timi. Marka aan ka hadleyno sababihii uuku fashilmay kama dhigna uu yahay Xidig Xun lkn Waxaan...
Kooxda Chelsea Oo Dhigeeda Barcelona Ku Wargalisay Qiimaha Ay Ku Heli Karto Wllian & Lacagtan Oo Ah Mid Ku Adkaan Karta Blaugrana.
Kooxda horyaalka England ee Chelsea ayaa dhigeeda Barcelona ku wargalisay qiimaha ay kaga samiri karto garabkeeda Willian kaas oo mudooyinkii u dambeeyay si weyn uga dhex muuqday magacyada liiska xiddigaha ah ee laga dhex hadal hayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Willian ayaa wakhti xaadirkan gudanaya waajibaadkiisa qaran isaga oo xulkiisa Brazil kula sugan dalka Ruushka...
Maurizio Sarri Oo Lagu Wado In Uu Seexdo Xarunta Tababarka Ee Chelsea Marka Uu Bedelo Antonio Conte
Maurizio Sarri waxa uu qorsheenayaa in uu seexdo xarunta tababarka ee Chelsea marka uu kooxda ku so biiro. Leyliyihii hore ee Napoli waxaa la qabaa in uu 24-ka saac ee ugu soo horreeya ku biiro kooxda ka dhisan galbeedka London. Tababaraha shaqada badan waxa uu xarun ka dhigan doonaa Cobham oo ah goobta taabarka ee Blues si uu isugu dayo qorsheynta dib u dhiska kooxda...
HORDHAC: Spain Vs Morocco – La Roja Oo Halis Geli Karta
Spain waxa ay wajeheysaa halis kulanka Morocco, haddii ay ugu yaraan bar bar dhac heli weyso oo looga badiyo wax ka badan 1 waxa dhici karta in ay badiso. Waa natiijo ku imaan karta haddii ay Iran ka badiso Portugal. Spain – Fernando Hierro si lama filaan ah ayuu u xishay Lucas Vazquez balse kama uusan faa’iideysan fursadaas Advertisement -Daniel Carvajal waxa uu muujiyey...
HORDHAC: Iran Vs. Portugal – Kulanka Dhimashada Ee Maanta
Kulanka ugu adage e koobka aduunka waxa uu dhexmari doona maanta Iran iyo Portugal. Labada tii badisay, haddii ay Spain badiso ayaa bixi doona. Iran saddex dhibcood ayey leedahay halka Portugal ay afar haysato. Haddii Spain ka adkaato Morocco oo hartay waxa ay tegi doontaa 7 dhibcood, halka tii badisau kulanka ay midna 7 tegi doonto –Portugal midna 6 -Iran Iran -Iran...
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa si rasmi ay u shaaciyay muuqaalka heesta koobka aduunka ee ‘Live It Up’ taas oo ay ka soo wada muuqdeen Will Smith, DJ Nicky Jam iyo waliba fanaanada Era Istrefi, waxayna hadda jamaahiirta kubbada cagta aduunku lix maalmood ka hor koobka aduunka bilaabashadiisa heleen muuqaalka rasmiga ah ee heesta lagu furi doono...